Imibala Yesigceme Yesekethe Yemigwaqo China Manufacturers & Suppliers & Factory
Imibala Yesigceme Yesekethe Yemigwaqo - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Imibala Yesigceme Yesekethe Yemigwaqo)
Ngokwezifiso m3 aluminium umehluko imibala ayisishiyagalolunye Hobbycarbon
Imibala ye-Aluminium Colored ye-Drone I-Female-Female Standoff, eyaziwa nangokuthi i-Double Female Standoff noma nje i-Standoff, ngomunye umndeni oyingxenye owakha ibanga phakathi kwezinto. Lezi zingxenye zingena zilandelana, i-hexagon nesokhethi zinemicu yabesifazane kuzo zozimbili izingxenye zalezo zingxenye...
Custom 6061 anodised ezimibalabala aluminium FPV uzimele intaba
Custom 6061 anodised ezimibalabala aluminium FPV uzimele intaba I-Hobbycarbon ingumkhiqizi ochwepheshe okhethekile ezingxenyeni ezithile ze-Aluminium machined, se-carbon fiber CNC yokusika insiza kanye nokuphrinta logo cishe iminyaka eyishumi. Izingxenye ze-Aluminium ze-CNC inqubo yokukhiqiza efezwa ngokucindezela...
Anodized ezimibalabala Aluminium hex Isinyathelo Spacer ukuma Anodized ezimibalabala Aluminium hex Isinyathelo Spacer ukuma I-Hobby carbon aluminium standoffs ifaka okungasindi, okuqinile, okuphathelene nokugqwala okuqinisekisa ukuthi imikhiqizo ithola impendulo enhle evela kumakhasimende ethu emhlabeni jikelele,...
Imibala ye-Hex Round Circuit Aluminium fastener Standoffs
Imibala ye-Hex Round Circuit Aluminium fastener Standoffs Ngokuma kwe- Aluminium , kunezitayela eziningi esitokweni sethu neminye imibala (imibala engu-9) Ezinjengokuthi: Aluminium Round Standoff, Aluminium Knurled Standoff, Aluminium Step Standoff, Aluminium Hex Standoff, Nylon Standoff (s) I-FAQ Q1.Mingaki iminyaka...
Imibala Ejikelezayo ye-Aluminium Standoffs M3
Imibala Ejikelezayo ye-Aluminium Standoffs M3 Abaningi be- Aluminium Fasteners zazishisa esitokisini, noma yiziphi izidingo pls zizwe zikhululekile ukuxhumana nathi. Usayizi oshisayo M3, hottle Aluminium Fasteners, umbala oshisayo ubomvu, luhlaza okotshani, onsomi, opinki, onsomi, onsundu, wegolide, owolintshi,...
eloxierte schrauben M3 ezimibalabala hex ekhanda aluminium isikulufa
Inkinobho ye-M3 Colored / cap cap i-Aluminium Screws I-Aluminium s nezisebenzi s nalolo ezimpilweni zethu. Ingayisebenzisa noma kuphi. I-Aluminium izikulufo zithandwa kakhulu ngenxa yesisindo sazo esilula nemibala emihle e-anodised emakethe. Izikulufa ze-Aluminium zihlukaniswe amakhanda ezinkinobho, ikhanda...
Izindonga Zokuhlobisa Ezimibalabala Wall Wall
Izindonga Zokuhlobisa Ezimibalabala Wall Wall Ngokuvamile, abantu bangathanda ukusebenzisa amapuleti e-fiber carbon. Futhi singanikeza ngefreyimu yeplanethi yelayisensi ye-carbon fiber enemibala. Inkonzo ye-OEM & ODM iyatholakala. Incazelo Yomkhiqizo: Into No.:CHCF077 Indwangu: 3K Full Carbon Fibre Ubunzima:...
Imibala ehlukene i-carbon fiber board board board e-Ebay ehlukahlukene
Imibala ehlukene i-carbon fiber board board board e-Ebay ehlukahlukene Ubukhulu balolu hlobo lukaphebula we-carbon fiber ngu-400X500mm no-500x600mm. Isebenzisa i-100% yekhabhoni fiber fiber ukwenza. Eminyakeni yamuva, amapuleti e-carbon fiber adume kakhulu ku-RC. Futhi, sinamapuleti engilazi ekhabhoni kanye namapuleti...
Imibala engu-7075 Aluminium Metric Screws
Imibala engu-7075 Aluminium Metric Screws Nayi inkinobho ye-aluminium ekhanda isikwele. Kulokhu kusebenza, sivame ukuba ne-aluminium engama-6061-T6 ne-aluminium engu-7075-T6 ngokukhetha kwakho. Olunye uhlobo: 1) i-Vibration Damper Screw 2) I-Aluminium Screw 3) I-Titanium Screw 4) Isikulufa Sensimbi 5) Isikulufa...
Hobbycarbon 20mm aluminium standoffs imibala anodized
I-Model No.: We002
Hobbycarbon 20mm aluminium standoffs imibala anodized Kuyini ukuma? I-Standoff luhlobo lwe-fasteners, imvamisa isetshenziswa nge-screws.it inentambo kuzinhlangothi zombili zokuphela, ngakho-ke uma isikulufa ngokusebenzisa iphepha, izinto ezintathu zingakha lonke. (Bona isithombe esingezansi) isetshenziswa kakhulu...
Imibala ye-M3 Aluminium Socket Cap Head Screws
I-M3 Aluminium Socket Cap Head Screws Izikulufu zethu ze- aluminium ezijwayelekile (i-Aluminium Fasteners) ziyizikulufa zekhanda le- aluminium , isikulufa se-aluminium socket cap , i-aluminium countersunk screws, i-aluminium countersunk screws. I-aluminium socket cap isonga imibala eminingi esitokweni. Ubude...
Imibala ye-Hex Round Nylon Spacers
Umbala weHex Round Plastic Nylon Standoff Imibala ye-Hex Round Round Round Nylon Standoffs Incazelo Noma ngabe ibhizinisi lakho lenza ama-elekthronikhi, izingxenye zezimoto noma okunye, kuba nezimo lapho kufanele kuhlanganiswe khona izinto zokwakha, kepha izingxenye ezishiyelwayo ngakho-ke azithinteki. Ama-Spacers...
Umbala Hex Nylon Stanoffs Round 4 40 Standoff Colored Hex Round 4 40 Nylon Standoff Incazelo Kukhona isikulufa hole phansi, silungisa nge-self-kampompi Isikulufa. Ukulungisa i-PCB ngaphandle kwamathuluzi, kulula ukuyifaka nokulayisha i-anti-erode, ukufakwa okuhle nokuphila okude. Zilungele ngokuphelele ukufakwa kwePCB...
Imibala Yesigceme Yesekethe Yemigwaqo Uhlaka Olunemibala Yemoto Yelayisense Yemoto Abakhiqizi Besiyingi Sebhodi Yesekethe Imibala Yezinkinobho Zekhanda Izikulufa Insiza Yemibala Yemibala Yemvelo Isikulufa Sesigcawu seChassis Isikulufa Sesigcawu ngeBhola Ekupheleni Imibala Yemibala Round Round